(Dhagayso) Xildhibaaan Burhaan Aadan Cabdi oo ku baaqay inaan la dhaarin xubin ka mid ah golaha deegaanka Garowe. – Radio Daljir
(Dhagayso) Xildhibaaan Burhaan Aadan Cabdi oo ku baaqay inaan la dhaarin xubin ka mid ah golaha deegaanka Garowe.
Agoosto 17, 2015 8:00 b 0
Garowe, August 17 – Xildhibaan Burhaan Aadan Cabdi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dawladda Puntland ayaa si diiran usoo dhaweeyay liiska golaha deegaanka degmada Garowe oo maantay lagu dhawaaqay, waxaase xildhibaanku ku baaqay inaan la dhaarin xubin ka mid ah golaha deegaanka oo uu ku tilmaamay in beel ay leedahay.
Xildhibaanku waxaa uu sheegay xubintaasi in dhismihii horre ee golaha deegaanka uu ahaa shaqsigii u dooday, waxaase uu hadalkiisa raaciyay cabsi uu ka qabo khilaaf-beeleed xubintaasi ka timaada.
“Waxaan ahay xildhibaan dowladda dhexe, beel-waliba xubta ay leedahay waa in ay heshaan, tusaale haddii ay birri beeshaasi ay canshuurta diido, amase nabad-galyo xummo ay la timaado yaa ka mas’uul ah, waxaa muhiim cid-kasta xaqeeda in la siiyo”
Xildhibaanka oo Radio Daljir waraysi siiyay hoos ka dhagayso
Liiska cusub ee xildhibaannada golaha deegaanka Garowe oo la shaaciyay
Ceydiid Ilka Xanaf oo loo gudbiyay Mooshin ka dhan ah Xasan Sheekh